Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Wareysigii Madaxweynaha oo dhameystiran ” 6 Qunsul oo Soomaali ah ayaa jaaliyadaha lashaqeyn doona”
Wareysigii Madaxweynaha oo dhameystiran ” 6 Qunsul oo Soomaali ah ayaa jaaliyadaha lashaqeyn doona”
November 26, 2011 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL: Sidaan idiin balanqaadney waxaan idiin soo gudbineynaa wareysigii aan la yeelanay madaxweynaha Deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar anagoo weydiiney su aalo badan oo la xidhiidha xaalka deegaanka iyo meesha ay waxmarayaan waxuuna ku bilawdey sidan:
Assalaamu Calaykum Madaxweyne salaan kadib kusoo dhawoow Warbaahinta Xaajo
Jawaab: Waan dhawahay waanad ku mahadsantihiin waqtigiina
XOL: Waxaad nooga warantaa safarka aad ku joogto magaalada Addisababa yaase kugu weheliya?
Jawaab: Safarkan aan Addis ku joogo waxaa weeye tababar ay dawladda dhexe diyaarisayay laguna baranayo waxyaabo badan oo deegaamada dalka ee kala duwan ku haboon waxaana xoogga lasaarayaa sidii hormarka guud ee dalka loo labanlaabi lahaa taasaana u joognaa meeshan waana gabagabo oo maalmo ayaa ka dhiman. Waxaa safarkan igu weheliya xukuumaddii deegaanka oo dhan oo iyaguna jooga Addisababa.
XOL: Wax manooga sheegi kareysaa waxyaabaha aad ku qaadaneysaan tababarkan ee khuseeya deegaanka Soomaalida?
Jawaab: Waxyaabo badan oo dalka oo dhan iyo deegaankaba khuseeya ayaan qaadanay balse waxaan tusaale ahaan usoo qabankaraa sida dadka deegaanka Soomaalida looga dhigi lahaa dad daggan oo xoolo iyo beeraba isla yeesha oo aan ku ekaanin kaliya iney ree guuraa noqdaan. Si loo helo damaanadda cuntada waxyaabaha aan baranayno waxaa kamid ah in shacabka deegaanku ay bartaan sida xoolo nacfi lehna loo heysto loona dhaqdo isla markaana beerana loo sameysto.
XOL: Maxaad uga jeedda Madaxweyne bal sii faahfaahi?
Jawaab: Waxaa weeye tusaale ahaan in qofku yeesho 50 halaad oo geel ah cimrigiisa ku dhameysto geeddi iyo socod caruurtiisuna waxbarasho la aan noqdaan waxaa ka haboon inuu yeesho 10 halaad oo hela daaq ku filan uuna ka helo caano ku filan isla markaana uu yeesha beer yar oo uu raashinka ku filan kala soo baxo ubadkiisiina wax ubartaan. Mar haddii abaaruhu noqdeen kuwa soo noqnoqda marwalba waxaa lagama maarmaan in dadku aysan marwalba noloshoodu noqonin mid baaba’ada haddii roobku daaho. Marka aqoon badan ayaa lagu soo bandhigey meelo badan oo ay dunida ka shaqeyseyna waan aragney marka deegaankeena middaas ayaan ku bilaabeynaa
XOL: Sidee loo bilaabayaa, mise waxey noqoneysaa uun hadal iyo rajo mase jiraan talo gal dhab ah oo ka yimid dhanka Federaalka?
Jawaab: Way naga go antahay hawshaasi dawladda Federaalkana waxey deegaankeena siineysaa miisaaniyad badan oo dheeri ah arintaasna lagu fulin doono waana bilaabeynaa sida ugu dhakhsaha badan Insha Allaah.
XOL:Madaxweyne ma jiro yool aad hiigsanaysaan si ay hawshaasi u hirgasho loona ogaado in wax la qabtey mise waa uun lasugayaa?
Jawaab:Sanadkan waxaa noo yaalla noona qorsheysan inaan 51000(Konton iyo Kaw Kun) oo ruux aan dajino wabiyada lana siiyo waxwalba oo ay ubaahanyihiin si ay noqdaan beeralay isku filaata marka waa arimo qorsheysan waana ku dhaqaaqeynaa.
XOL:Dadkan intaas dhan xaggee laga soo xulanayaa ma waddanka oo dhanbey ka imaan doonaan?
Jawaab: Wajigan dadkan waxaa laga soo xulayaa waa saddexda gobol ee kala ah: Afdheer, Liibaan iyo Godey.
XOL:Goormaad ku laabaneysaan Jijiga maxaase idiin qorsheysan oo aad ugu horeyn qabaneysaan?
Jawaab: Ugu danbeyn Arbacadan ayaan laabandoonaa mar haddii tababarkii dhamaado waxaan galaynaa shaqadii waxaana ugu horeyn aan xoogga saareynaa arimaha dib udajinta iyo waxbarashada Deegaanka?
XOL:Dhawaan waxaad sameyseen isku baddal guddoomiyayaasha dagmooyinka sidee u shaqeeyeen?
Jawaab:Arintaas waxey noqotey Model wanaagsan oo dalka oo dhan laga amaanay. Waxyaabo badan oo dagmooyinka hormarkooda hortaagnaa ayaa maanta laga gudbey waxeyna ahayd talaabo wanaagsan oo dagmooyinka iyo dadka u wanaagsan wayna muuqataa hormarkeedu
XOL: Waxbarashada deegaanka bal ka waran?
Jawaab: Waxbarashada Deegaanku meel wanaagsan ayay mareysaa waxaana hadda qaarna dhamaadeen qaarna gacanta lagu hayaa dugsiyo sare oo laga sameeyey meelo aan waligeed dugsiyo sare lahayn oo caruurtu marka fasalka 8aad dhameeyaan ay waxbarashada ka hadhi jireen waxaana kamid ahaa meelahaas, Dhuxun, Dhagaxmadoow iyo Gunagada waana dadaalka xukuumadduu ugu jirto in dagmooyinka oo dhami yeeshaan dugsiyo sare.
XOL: Dhanka nabadgalyada deegaanka bal inooga waran?
Jawaab: Nabadgalyada deegaanku waa heersare maanta deegaankeenu waa nabad illaahay mahaddiis wax dhib ahna kama jiraan. Ciidamada Liyuu Booliska ayaa hawshaas gacanta ku haya meelkastana jooga shacabka ayaana la shaqeynaya iyagaana maanta qaatey masuuliyadda sugitaanka amniga waana hormar taabbagalay.
XOL:Madaxweyne jaaliyaadka iyo qurba joogta balamo badan ayaa wada gasheen markii aad socdaalka ku timaaddeen walina waxaad mooddaa waxbadan ayaa laalan sidee wax u jiraan?
Jawaab: Waa run in hawlo badan iyo balamo badan aan kala qaadanay balse shaqadeenii waan haysanaa. Tusaale ahaan waxaa dhawaan mar aan fogeyn dalalka dibadaha Yurub iyo Afrikaba loo soo diri doonaa Qunsullo awood badan oo Soomaali ah oo la shaqeyn doona jaaliyaadka kuwaasaana noqondoona isku xidhka deegaanka, dalka iyo jaaliyaadka.
XOL:Dalalka manoo sheegi kareysaa?
Jawaab: Waa laba Yurub ah, laba Ameerika ah iyo Laba Afrika ah; Dalka Sweden, Dalka Jarmalka, Sadiego iyo Minesoto, Kenya iyo Jabuuti. Dhamaan waxaa tagaya Soomaali qunsullo ah iyagaana hawshii loo baahdo oo dhan qabanaya. Marka maanaan ka bixin balankii waan ku hawlaneyn mardhawna shaqaalahaas ayaa soo gaadhi doona dalalkaas iyagoo tababar hadda ku jira.
XOL: Dhanka Warbaahinta bal nooga waran iyo TV-ga Deegaanka Soomaalida?
Jawaab: Waxay kamid ahayd codsiyada jaaliyaadka inaan sameyno warbaahin ay deegaanka kala socdaan marka ESTV waan hirgaliney waana hormarin doonaa.
XOL: Waxaan fileynaa inaad ARABSAT galiseen TV ayna dad badan oo Yurub jooga ku dhibanyihiin iney daawadaan marka sidee ayaad u xalin kareysaan arintaas?
Jawaab: Tijaabo ayuu ahaa waana aragney baahida loo qabo marka hadda waxaan galin doonaa HOTBIRD- Sat si Yurubna looga daawado.
XOL:Ugu danbeyn xidhiidhka gobolada dalka dariska la ah qaarkood ma quruxsana ee sidee wax u jiraan?
Jawaab: Ana xukuumad ahaan hawlo badan ayaa noo yaalla Priority-yana waan leenahay taasaa na khuseysa iyo sidii deegaanka hormarkiisa, amnigiisa iyo xasiloonidiisa looga shaqeyn lahaa.
XOL: Maxaad ugu danbeyn dadka iyo akhristayaasha Warbaahinta Xaajo gaadhsiineysaa oo aad kula dardaarmeysaa?
Jawaab: Waad mahadsantihiin waxaan leeyahay dalkiina aamina kana shaqeeya sidii loo hormarin lahaa waaxyaha kala duwan ee deegaanka waxbarashada, nabadgalyada, caafimaadka, maalgashiga iyo sidii aan deegaan ahaan uga qaybqaadan lahayn qorshaha weyn ee dawladda Federaalku soo bandhigtey shanta sano. Dhul wanaagsan iyo kheyraad badan ayaan leenahay mar haddii aan nabaddii sugney waa in shacabku usoo jeedsadaan hormarka kana faaiidaan.
XOL: Waad mahadsantahat waqtigaaga madaxweyne
Jawaab: Waad mahadsantihiin